Toerana ho an'ny Selfie
Ny fitiavan-tena dia tsy azo iantsoana endrika zavakanto , tsy mijery ny karazana fialamboly izany. Indrisy anefa fa voafetra ny fisian'ny sary amin'ny tifitra amin'ny endriky ny selfie. Izany dia noho ny fahafahanao manamboatra ny tenanao manoloana ny tontolon'ny fitaratra na amin'ny fanampian'ny sandriny efa tony. Ny karazana sary misy ireo tovovavy miaraka amin'ny teboka mitongilana dia mijery tsara kokoa. Raha misy tanjona ny hameno ny kaontinao amin'ny kalitao sy sary mahaliana, dia mendrika ny hianatra ny tsara indrindra ho an'ny selfi sy fitsipika fitifirana.
Rehefa mitifitra ny tenany tsy misy fitaratra amin'ny tànana efa trotraky ny tanany, dia tsy mahita afa-tsy ny tarehy sy ny tratra ianao. Mazava ho azy fa tokony hotsinjovina ireo tovovavy ireo mba hahafahan'ireo maso mibaribary, ary tsy manakorontana ny endriky ny tratra. Mba hanaovana izany, ny lohany dia tokony hionona kely mba hijery ny fakantsary tsy mahitsy, fa amin'ny lafiny iray. Ny lamosina dia tokony ho, ary kely ny ankamaroan'ny bokotra (tsy te hijery ny kofehy manodidina ny tendanao?). Sarotra tanteraka ny sary nalaina, satria mampitombo ny orona ny fakantsary. Aza avela hisy vokany raha mametraka ny fakantsary tsy eo anoloan'ny tarehinao ianao, fa eo amin'ny lohanao. Ankoatra izany, ity fomba ity dia ahafahanao mamorona endrika mahaliana ho an'ny Selfie, satria ao anatin'ilay rafitra dia tsy hahita ny endrika fotsiny ianao, fa koa ny toe-javatra manodidina.
Ny ankizivavy dia tia maka sary an-tsaina ny tenany ao amin'ny orinasa amin'ny sipany. Ny fihotsahana amin'ny tànana efa tratra dia tsy mety amin'izany tanjona izany, satria tsy mora loatra ny mipetraka anaty rojom-borona nefa tsy manimba tarehy roa. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny fitaratra fitaratra. Ny toerana ho an'ny selfie miaraka amin'ny sipa na sipa eo anoloan'ny fitaratra dia mety ho zavatra! Mitsangàna, manaova fisaonana mampihomehy, mitsikia, mifamihina, mankafy ny fantsom-bokatra amin'ny alalan'ny mololo! Ny tena zava-dehibe dia ao amin'ny ankolafy izay hitanao araka ny voajanahary araka izay tratra. Ny lamaody mahatsikaiky ho an'ny Selfie dia mijery fahombiazana bebe kokoa noho ny miseho amin'ny tsiky sy ny fihetseham-po diso. Azonao atao ny manandrana miresaka amin'ny fitaratra maromaro. Ny sary avo roa na telo dia mitovy amin'ny endriny.
Ireo tia ny Selfie, dia mankafy tsotsotra ireo mpizarazara amin'ny pejiny amin'ny sary mahafinaritra, mampiasa fomba tsotra. Manandrana ny trano eo anoloan'ny fitaratra izy ireo, mianatra ny fomba mahasoa indrindra, ary manova kely kely izany. Tsy safidy ratsy izany!
Na ny tsara indrindra ho an'ny Selfie aza dia tsy hankasitraka ny mpijery raha tsy efa nikarakara ny fahazavana marina ianao. Ny fahazavana koa dia afaka manantitrantitra ny hakanton'ny hoditra, ny lokon'ny volom-borona, ny hatsaran-tarehy, ary ny farany dia manimba ny fahatsapana. Ao amin'ny efitrano maizimaizina, ny selphi dia manjavozavo, maitso, ary aloky ny tarehy izay tsy manampy bika. Ny mahomby indrindra amin'ny selfie dia manome soso-kevitra mazava mivantana. Ny safidy tsara indrindra dia ny tara-masoandro, izay mametraka ny modely eo amin'ny tarehiny.
Tokony hodinihina tsara ny hatsaran'ny tarehy. Na dia misy faniriana hijery araka izay azo atao aza, dia tsy handratra ny glosice eo amin'ny molotra sy ny mascara matevina eo amin'ny volom-borona. Mahatsiaro tena ho an'ny Selfie dia mena mena, mena mavokely ary volomparasy volomparasy. Avy ao amin'ny boribory maizimaizina eo ambany maso no hamonjy ilay masoivoho. Ny volo no tsara indrindra amin'ny rambony na ny bundle, mba tsy handrakofany ny tarehimarika, raha tsy mazava tsara ny mistery sy mistery sasany.
Fantaro amin'ny poses, manova ny toe-javatra, manaova fanamiana, ary avy eo dia ny toky azo antoka fa hahazo "mihoatra ny zato" mihoatra ny zato!
Jockey ny akanjo
T-shirt Wedding ho an'ny mpivady vao
Miakanjo amin'ny vehivavy matavy amin'ny fankalazana
Jacket miaraka amin'ny jeans - fomba tsotra sy kazhual
Afaka mitondra bisikileta ve ny vehivavy bevohoka?
Alika an-trano kely
23 zava-mahagaga momba ny biby izay hampahery anao!
Misintona ny Paska ho any am-pianarana
Ahoana ny fomba hanomezana anarana an'io zaza io amin'ny patronym?
Renim-pianakaviana nandritra ny fitondrana vohoka
Ahoana ny fomba hanamboarana ranomandry ao anaty lafaoro?
Maorisy - hotely
Ny fampakaram-bady dia milanja volafotsy
Voninkazo avy amin'ny tanany